हामी अब फैसलाको अध्ययन गर्छौं : बार अध्यक्ष श्रेष्ठ - कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १८, २०७७ कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर देशभरका बारहरुलाई शंकास्पद र विवादित देखिएका आदेश/फैसला संकलन गर्न र नेपाल बार एसोसिएसनमा पठाउन सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । यसअघि पनि कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारमा फैसला अध्ययन गर्नेबारे पटकपटक छलफल भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
यही विषयमा कान्तिपुरका कृष्ण ज्ञवालीले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :
बारले फैसाल अध्ययन गर्ने भनेको छ । कसरी अध्ययन गर्छ ?
कसैलाई फैसलामा वा आदेशमा चित्त नबुझेमा बारबाट गुनासो संकलन गर्ने र फैसलाको अध्ययन गर्ने हो । चित्त नबुझ्नेले पुनरावेदन दिने त आफ्नो ठाउँमा छ । तर, फैसला वा आदेशबाट साह्रै नै अन्याय परेमा वा अति नै चित्त नबुझेका पक्षहरुलाई यसरी हेर्न खोजिएको हो । यी फैसला हेरेर हामीले ‘फरवार्ड’ गरिदिने हो ।
कहाँ पठाइदिनुहुन्छ ?
जिल्ला वा उच्च बारहरुले नेपाल बारमा पठाउँछन् । हामीले न्यायपरिषद् र सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं । बारले आवश्यकता अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्छ । हेरेर कतिसम्म गर्नुपर्ने हो, गर्छौं ।
विवादित बनेका पछिल्ला दुई विषय (फैसला र आदेश) बारे पनि अध्ययन हुन्छ ?
रञ्जन कोइरालाको घटनामा पुनरावलोकनको निस्सा नै भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालत स्वयंले त्यो फैसलामा गल्ती वा त्रुटी छ भनेर महशुस गरिसकेको अवस्था हो । त्यहींबाट नै अब टुंगो लाग्छ । जन्मकैद सदर गरे पनि पुरानो ऐनको व्यवस्था टेकेकोमा विवाद हो । छिटै त्यसको निरुपण हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यसैले अदालतमै विचाराधीन भएको यो विषयमा अब हामी प्रवेश गर्दैनौं ।
त्यसरी हेर्दा त अरु मुद्दा पनि कहीं न कहीं विचाराधीन हुन्छन् । तिनमा के गर्नुहुन्छ ?
अदालतमा फैसला वा आदेश भइसकेपछि चित्त नबुझेमा माथिल्लो तहमा जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो नियमित प्रक्रिया भयो । त्यसमा अरु किसिमको शंका लागेमा, त्रुटि देखेमा वा हुनै नपर्ने गम्भीर कुरा भयो भन्ने देखिएमा वा लागेमा बारमा गुनासो संकलन गर्ने, त्यस आधारमा फैसला हेर्ने र नेपाल बारमा पठाउने भनिएको हो । माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गरेका आधारमा मात्रै मलाई चित्त बुझेन भन्ने लागेमा बारमा पठाउन सकिन्छ भनेका हौं । त्यसपछि अध्ययन गरेर कैफियत भेटिए हामीले आफ्नो प्रतिक्रियासहित नै सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं ।
तपाईहरुले यसअघि नै घोषणा गरेको एनसेलको फैसला अध्ययन हालसम्म पनि अलपत्र छ । अनि ?
एनसेलको फैसलाको बारेमा हामीले बरिष्ठ अभिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थियौं । त्यसमा रहेका केही साथीहरुले हेर्न नमिल्ने स्थिति भयो भनेपछि हामीले त्यसलाई पुनर्गठन गरेका छौं । त्यसमा अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता पवन ओझाको संयोजकत्वमा कमलनारायण दास, गुणनिधि न्यौपाने, रविनारायण खनाल र सदस्य सचिवमा कोषाध्यक्ष रुद्र पोख्रेल हुनुहुन्छ । उहाँहरुले हेरिरहनुभएको छ ।
अदालतको विसंगतिमा बार सधैं मौन छ । अहिले त सञ्चारमाध्यममाथि बारले पनि आरोप लगाएको छ । किन होला ?
सञ्चारमाध्यमले फैसलाको कमिकमजोरी औंल्याउन सक्छन् । सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिमा पनि त्यो कुरा बोलेको छ । स्वच्छ रुपमा मूल्यांकन हुने कुरा भएकै छ । आलोचना गर्दा न्यायपालिकाको आस्थामा नकारात्मक असर पर्ने किसिमको काम तपाई हामी कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्ने हो । आलोचना गर्न हुँदैन भनेको होइन । आलोचना गर्न हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि बोलेको छ । त्यत्ति हो, मर्यादाबारे विचार गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १९:५०
श्रावण १८, २०७७ विनोद पाण्डे
काठमाडौँ — दुई वर्षअघि नेपाली क्रिकेटको नेदरल्यान्ड्स यात्रा धेरै कारणले विशेष थियो । मुख्य कारण अरु केही नभएर यहींबाट नेपाल एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रवेश गर्दै थियो । जिम्बावेमा २०१८ को विश्वकप छनोटबाट एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राष्ट्र बनिसकेको थियो ।
हरारेमा नेपालले मार्च १५ मा भएको निर्णायक खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गर्दै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हासिल गरेको थियो र त्यसको ठिक साढे चार महिनापछि अगस्ट १ मा एमस्ट्राडममा नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्दै नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रारम्भ गर्‍यो । नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय यात्राले शनिबार दुई वर्ष पूरा गरिसकेको छ ।
सन्दीप लामिछानेका लागि अझ यो यात्रा विशेष बनिसकेको थियो । नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्नुअघि नै उनी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल), बंगलादेश प्रिमियर लिग, पाकिस्तानी प्रिमियर लिगजस्ता फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता खेलेर ‘ग्लोबल स्टार’ बन्दै थिए ।
एमस्ट्राडामको स्टेलभिन्समा उनले नेदरल्यान्ड्सका ओपनर स्टेफन माइबर्गलाई बोल्ड गरेर नेपाललाई पहिलो खेलमै विजयको आशा देखाएका थिए । तर, नेपालले त्यो खेलमा विजय हात पार्न सकेन । जे भए पनि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा गरेको ‘डेब्यु’ बाट तरंगित भएका सन्दीपले भोलिपल्ट आफ्नो जन्मदिन विशेष बनाउन पाएका थिए । आइतबार आफ्नो २० औं जन्मदिन मनाइरहँदा सन्दीप पहिलो एकदिवसीय यात्रालाई लिएर अझै रोमाञ्चित हुने गर्छन् ।
‘नेपाल एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राष्ट्र बन्नु र त्यही बेला मैले फ्रेन्चाइज लिगहरु खेल्न पुग्नुले सकरात्मक पक्ष भयो । राम्रो मिहेनेत गर्‍यो भने हामी र नेपाली खेलकुदमा राम्रो सम्भावना छ भन्ने देखायो । यसले एक-अर्काकोमा विश्वास बढ्न पुग्यो । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राष्ट्र बनेपछि फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिगमा खेल्न जाँदा सबैको प्रतिक्रिया राम्रो नै थियो । तिमीमा, नेपाली खेलाडीमा क्षमता छ भनेर भन्थे धेरैले भनेका छन्,’ सन्दीपले कान्तिपुरसँग भने ।
नेदरल्यान्डसँगको दोस्रो तथा अन्तिम खेल १ रनको रोमाञ्चक विजयसँगै नेपालले शृंखला बराबरी गर्न सक्यो । अर्थात् नेपालले दोस्रो खेलमै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको विजयको स्वाद चाखेको थियो । कप्तान पारस खड्का र सोमपाल कामीको अर्धशतक बाहेक नेपाललाई विजय दिलाउनेक्रममा सन्दीपले सर्वाधिक ३ विकेट लिएका थिए । नेपालले त्यसयता खेलेको सबै १० एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल्नेमा सन्दीपसहित कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, पूर्व कप्तान पारस खड्का, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आरिफ शेखमात्र छन् ।
सन्दीपले यी १० खेलमा नेपालबाट सर्वाधिक २३ विकेट लिइसकेका छन् । अमेरिकाविरुद्ध १६ रन खर्चेर ६ विकेट लिनु उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन हो । यही प्रदर्शनमा अमेरिका फागुनमा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ३५ रनमै अलआउट भएको थियो । सो खेलमा नयाँ बल लिएर आएका सन्दीपको धारिलो बलिङलाई झेल्न नसकेपछि अमेरिका एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको अहिलेसम्मकै न्युन स्कोरमा समेटिएको थियो ।
‘एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतापछि हामीले गरेको प्रदर्शनको मूल्याङ्‍कन गर्ने अहिले ठाउँ नै छैन किनभने अहिले हामीले धेरै खेल खेलेकै छैनौं । मलाई आफ्नो टिम र खेलाडीहरु प्रति धेरै विश्वास छ, त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै खेल खेल्न जरुरी छ,’ उनी द्विपक्षीय शृंखलाहरु नेपालले खेल्नु पर्ने संकेत गर्छन् ।
विश्वकप छनोट र एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा रहँदा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बनमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले क्यानमाथीको निलम्बन फुकुवा गरेको ९ महिनामात्र भएको छ । नेदरल्यान्ड्सको क्रिकेट यात्रा डच क्रिकेट बोर्डको निमन्त्रणपछि सम्भव भएको थियो । नेपालले दुबईमा गएर युएईसँग खेलेको तीन खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला पनि इमिरेट्स क्रिकेट बोर्डको निमन्त्रणापछि मात्र हो । युएईसँगको अर्को एक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल एसिया कप छनोट प्रतियोगिताले जुराएको थियो ।
फागुनमा नेपालले विश्वकप लिग २ को यात्रा सुरु गरेको थियो । त्यहीं नेपालले अमेरिका र ओमानसँग २–२ खेल खेलेको थियो । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राष्ट्र बनेपछि विश्वकप लिग २ मा रहेको नेपालले ४ खेल खेलिसकेको छ र २०२२ सम्म गरी गरि नेपालले थप ३२ खेल खेल्न बाँकी रहेको छ ।
सन्दीप भन्छन्, ‘नेपालले यो दुई वर्षमा धेरै खेल खेल्न पाएन, त्यो हाम्रो धेरै ठूलो त्रुटि नै हो । एक वर्ष त नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमै थियो, त्यसले पनि धेरै कुरा गुमाउन पुग्यौं, धेरै खेल खेल्न पाएनौं । १० खेलको सट्टामा २० वा २५ खेल खेलेको भए कसैको क्षमतालाई मूल्याङ्‍कन गर्नु हुन्थ्यो, जुन यो हामीले अहिले गर्न सक्दैनौं । २०–२५ खेल खेल्न पाएको भए हामीले धेरै कुरा सिक्न पाउथ्यौं, धेरै कुरा राम्रो बनाउन सक्थ्यौं ।’
त्यही पनि नेपालले यो २ वर्षमा जति खेल खेल्न पायो त्यसमा उनी सन्तुष्ट हुने प्रयास गर्छन् । ‘यो दुई वर्षको यात्रा मलाई लाग्छ ५०–५० नै रह्यो । तर, धेरै थोरै खेल्न पुग्यौं । अबका दिनमा जेजस्तो त्रुटि भयो त्यसलाई घटाउँदै जाने र सकरात्मक पक्षलाई बढाउँदै जाने सोचिरहेको छौं,’ उनी आशावादी छन् ।
क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्न सन्दीप शनिबार जमैका पुगिसकेका छन् । अगस्ट १८ देखि सेप्टेम्बर १० सम्म क्यारेबियनमा हुन लागेको प्रतियोगितामा उनी यसपटक कीर्तिमानी रकममा जमैका तलावाजबाट सीपीएल खेल्दै छन् । सीपीएलका लागि सन्दीपले आफ्नो रकम ९० हजार डलर तोकेका थिए र उनलाई जमैका तलावाजले पहिलो ड्राफ्टमै लिएको थियो ।
सन्दीपले विश्वव्यापी फ्रेन्चाइज लिग खेलेर लिन लागेको यो सबैभन्दा ठूलो पारिश्रमिक रकम हो । यसै वर्ष इंग्ल्यान्डमा हुने भनिएको ‘द हन्ड्रेड’ मा सन्दीपले एक लाख पाउन्ड लिएर खेल्नेवाला थिए । तर, कोभिड १९ (कोरोना) को महामारीका कारण पहिलोपटक हुन लागेको उक्त प्रतियोगिता रद्ध भइसकेको छ । सन्दीपले २०१८ मा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पेट्रियट्सबाट ५ हजार डलरमा तथा गत वर्ष बार्बाडोस ट्राइन्डेट्सबाट ७० हजार डलर लिएर खेलेका थिए ।
प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १९:४०